Zixi - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအရည်အသွေး IP ကိုလုံခြုံစွာပေးပို့ခြင်း။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
Mobile TV Group သည်တတိယမြောက် 'FLEX' OB ထရပ်ကားတစ်ခုကို Calrec Artemis နှင့် IP Gateway မှ audio-over-IP စွမ်းရည်များဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား၏ Arirang တီဗီသည်အနောက်ဥရောပတွင်၎င်း၏ HD ရုပ်သံလိုင်းကိုထုတ်လွှင့်ရန် Globecast နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်
Multidreen Video Delivery တွင် Media Excel နှင့် VUALTO တို့သည်မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်ပူးပေါင်းမှုကိုတိုးချဲ့သည်
Net Insight သည် cloud အခြေခံ live media လုပ်ငန်းအသွားအလာများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်
TV5MONDEplus ကို Red Bee နှင့် Dotscreen တို့ဖြင့်အောင်မြင်စွာလွှင့်တင်ခဲ့သည် - ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၄ နိုင်ငံသို့အခမဲ့ပြင်သစ်စကားများကိုလွှင့်ထုတ်သည်။
24i နှင့် Amino တို့သည် Android TV သို့ Turbo Boost ကိုပေးသည်
ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်အတွက် Matthews ၏ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
Finishing Editor နှင့် Workflow Specialist Samantha Uber သည် Goldcrest Post တွင်ပါဝင်သည်
Sidharth Srinivasan ၏“ KRIYA” ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်သည် DaVinci Resolve စတူဒီယိုတွင်ပါဝင်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Zixi: လုံလုံခြုံခြုံ IP ကိုကျော်တိုက်ရိုက်, ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးဗီဒီယိုပျ
တိ Baldwin, ကုန်ပစ္စည်း, Zixi ၏ဦးခေါင်းကနေ
ယနေ့စားသုံးသူ၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်မှာအကြောင်းအရာချင်တယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကျေနပ်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းအချက်များမှာကယ်မနှုတ်ကြောင်းကိုနည်းလမ်းတွေထဲမှာထုပ်ပိုးမဆိုကိရိယာပေါ်သည့်အချိန်တွင်မဆို content တွေကိုလောင်ချင်တယ်။ မီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကပိုသောအရပ်တို့ကိုမယ့်ပိုပြီး programming ကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် IP ကိုဖြန့်ဖြူးကြောင်းပြီးမြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖောက်သည်များကဒီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုံသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အဖြစ်ဒါပေမယ့်သတင်းရင်းမြစ်နှင့်အသုံးပြုမှုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ရှုပ်ထွေးသောရရှိရန်စတင်နှင့်လုံခြုံရေးဆက်ဆက်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Zixi အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ပံ့ပိုးပေးမြင်ကွင်းနှင့်တစ်လျှောက်လုံးအကြောင်းအရာလုံခြုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှစ်ဦးစလုံးပေးခွငျးဖွငျ့ထိုအတှေ့ရှိထားခါအင်တာနက်-မောင်းနှင်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက် navigate ကူညီပေးသည်။ သူဟာ Emmy-အနိုင်ရနည်းပညာနှင့်အတူ, Zixi အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေးကျော်အမွေ fixed ကဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်နေရာတွင်အစားထိုးကူညီပေးနေ, virtualized တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အအုံမှအဓိကဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တု နှင့်သာလွန်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးဘို့အင်တာနက်အလုပ်စေသည်ဝေးသောပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အရွယ်မှာ, တတ်နိုင်နှင့်လုံခြုံဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဖိုင်ဘာ။
THE supply chain ဖြတ်ကျော် Securities ဗွီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွင့်
ကျနော်တို့ကပရီမီယံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာမှကြွလာအထူးသဖြင့်သောအခါ, ထုတ်လွှင့်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းလုံခြုံရေးအစွမ်းကုန်စိုးရိမ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဒါကြောင့် IP ကိုကျော်စီးပို့ဆောင်ရန်ကြွလာသောအခါ, content တွေကိုပံ့ပိုးပေးသူတို့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်မြစ်ရေအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့လုံလုံခြုံခြုံတစ်ဦးချင်းစီအဆုံးမှတ်အပ်ခဲ့သည်သေချာနိုင်သည့်မှတဆင့်အဖြေတစ်ခုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကိုနှင့်အတူ IP ကိုကျော်အပြည့်အဝအဆုံးမှအဆုံးသို့လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ဦးမှ point-သို့မဟုတ် Point-to-Multi-အမှတ်ဖြန့်ဖြူးမြင်ကွင်းကနေပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြန့်ဖြူး enable လုပ်ဖို့, Zixi cloud-based ကိုထိန်းချုပ်လေယာဉ် Zen မာစတာဖန်တီးခဲ့သည်။ Zen မာစတာနှင့်အတူ, Zixi ဒီနေ့ရဲ့ content တွေကိုပံ့ပိုးပေးလုံလုံခြုံခြုံအကြောင်းအရာအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောယုံကြည်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဖြူးမှုအဆင့်ခွင့်ပြုကွန်ယက်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဖြေတစ်ခုပေးစွမ်းသည်။ ဤသည် virtualized မာစတာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကဖောက်သည်များဝယ်ယူရာမှပေးပို့ဖို့ CDN, MSO, MVPD, ဒါမှမဟုတ် OTT ပလက်ဖောင်းမှဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကိုပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Zen မာစတာ၌ဤအဆုံးမှအဆုံးသို့အမြင်အားပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်၎င်းတို့၏ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာရည်ရွယ် Endpoints မှယုံကြည်စိတ်ချရသောကိုအပ်ခံရကြောင်းစဉ်ဆက်မပြတ်အတည်ပြုချက်ကိုရှိသည်။
Zixi ရဲ့အကောင်းဆုံး-In-class ကိုလုံခြုံရေး protocols များနှင့်ခေတ်မီကာကွယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ Zixi ပလက်ဖောင်းများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွှာသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ content တွေကိုပေးပို့ဖို့ရှေးခယျြအကြီးမားဆုံးအကြောင်းပြချက်အကြားရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Zixi-enabled ကွန်ယက်အတွက်ဒေတာအားလုံးကို multi-အလွှာလုံခြုံရေးချဉ်းကပ် အသုံးပြု. ကာကွယ်ထားသည်။
တိုက်ရိုက်ထည့်ဝင်မှုနှင့်ဖြန့်ဝေရန်အတွက် Zixi သည်အကြောင်းအရာကိုကာကွယ်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ ပထမနည်းမှာ AES-128/256 encryption ကို သုံး၍ static key encryption ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့်သော့သည်ပို့လွှတ်သူနှင့်လက်ခံသောကိရိယာနှစ်ခုလုံးတွင်ထည့်သည်။ အကယ်၍ packets ကိုတတိယပါတီမှကြားဖြတ်ယူလျှင်၎င်းတို့သည်စာဝှက်။ နားမလည်နိုင်တော့ပါ။ ဤနည်းလမ်းသည်စီးဆင်းမှုတွင်အခြေခံအဆင့်ကိုလုံခြုံစေသည်။ Zixi နှင့်အတူဒုတိယလုံခြုံရေးနည်းလမ်းမှာပို့လွှတ်ခြင်းနှင့်လက်ခံသည့်ကိရိယာအကြား Datagram ပို့ဆောင်ရေးအလွှာလုံခြုံရေး (DTLS) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စီးကြောင်းနှင့် ဦး တည်ရာအကြားကြားဖြတ်ခြင်းကိုမခံနိုင်စေရန် DTLS သည်အပြည့်အဝ session control ကိုထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DTLS ကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခြင်းသည် Zixi ကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုစနစ်များသည်ခိုးနားထောင်ခြင်း၊ ချိုးဖောက်ခြင်း (သို့) မက်ဆေ့ခ်ျအတုများကိုခွင့်မပြုဘဲတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုအကြောင်းအရာကိုဖလှယ်ခြင်းနှင့်လူ-အလယ်အလယ် (MITM) တိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဆုံးမှအဆုံးသို့ဒေတာ encryption အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်မှု၊ အသုံးပြုသူအခွင့်အရေးနှင့်လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည့် Single Sign-On နှင့်စနစ်တစ်ခုထဲမှမည်သို့ ၀ င်ထွက်နိုင်သည်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ZEN Master Control လေယာဉ်အလွှာတွင်လုံခြုံရေးအစီအမံများကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်သည်။ (SSO) နှင့် 2- အချက် authentication ကို။
ကပရီမီယံတိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များ streaming မှကြွလာသောအခါသုံးစွဲသူများမကြာခဏအခမဲ့ထိုအစောင့်ကြည့်ဖို့နည်းလမ်းရှာချင်သောကွောငျ့ခိုးကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထိပ်တန်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ စသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သော YouTube ကိုတိုက်ရိုက်အဖြစ် Self-တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-streaming site များပေါ်ပေါက်ရေး, Twitch အတူအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များစားသုံးသူလူထုဤ pay-per-အမြင်ဖြစ်ရပ်များ "streaming တိုက်ရိုက်" စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ Zixi ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လုံလုံခြုံခြုံသူတို့ရဲ့ content တွေကိုကြားဖြတ်နှင့်ဤပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပေါ်ထွန်းခံရဖြစ်နိုင်ခြေမပါဘဲသူတို့ရဲ့ content တွေကိုရည်ရွယ် Endpoints ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကူညီပေးသည်။
ကပရီမီယံ pay-per-အမြင်မော်ဒယ်ကနေတိုက်ရိုက်လွှအားကစားဖြစ်ရပ်များပို့ဆောင်မှကြွလာသောအခါ Zixi အရှိဆုံးအထူးသခိုးကူးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူဆကျဆံ။ ဥပမာအားဖြင့်, UFC ကမ္ဘာ့ဝန်ကြီးချုပ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ UFC ဖြစ်ရပ်များကယ်နှုတ်တော်မူရန်အ Zixi ပလက်ဖောင်း leverages, စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအနုပညာအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး pay-per-အမြင်ဖြစ်ရပ် provider ကရော။ တိုက်ရိုက်တွေ့ကြုံခံရဖို့လိုအပျကွောငျးထိုအကြီးတွေ, ယဉ်ကျေးမှုအချိန်လေးအတွင်းမှာတော့ငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းမြင့်မားသည်။ High-profile ကိုအချိန်လေးအတွင်းမှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် Zixi ပလက်ဖောင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖြစ်နိုင်သမျှအကြီးဆုံးပရိသတ်တွေရောက်ရှိဖို့ IP ကိုဖြန့်ဖြူးကိုသုံးနှင့်လုံခြုံရေးများ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုသူတို့ရဲ့စီးနှင့်၎င်းတို့၏ဝင်ငွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလုပ်ခံရသည်ဟု သိ. စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်ဓားပြများကိုရင်ဆိုင်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ပင်လယ်ဓားပြများ၏အရင်းအမြစ်များနှင့်နည်းလမ်းများကိုနားလည်ပြီး၎င်းတို့ကိုနှောင့်ယှက်ရန်ကြိုးစားရမည်။ လက်ရှိတွင်ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများ၏ထည့်ဝင်မှုနှင့် backhaul ကို Zixi မှအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းလမ်းများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ နောက်ဆုံးကြည့်ရှုသူများသို့ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာကို Condition Access နှင့် Digital Rights Management မှကာကွယ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်အကြီးမားဆုံးပင်လယ်ဓားပြခြိမ်းခြောက်မှုသည်ဗွီဒီယိုကိုဖမ်းယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူကိရိယာအဆင့်မှာအကြောင်းအရာ။ ကြည့်ရှုသူများ၏ကိရိယာများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဟက်လုပ်ခြင်းသည်ထိုအကြောင်းအရာကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ပြန်လည်ဝေငှရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းမှာရေစာဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များသည်ဗွီဒီယိုတွင်မမြင်နိုင်သောရေစာအမှတ်အသားကိုထည့်နိုင်ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ဤရေစာမှတ်သို့ရှာဖွေရန်အလိုအလျောက်စနစ်တစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။ တရားမ ၀ င်သောဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရှိပါကအကြောင်းအရာပိုင်ရှင်သည်စီးဆင်းမှုကိုပိတ်ရန် streaming ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ အထောက်အပံ့ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MStar OTT SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-06
ယခင်: နည်းပညာခေတ်ရေစီးကြောင်း: သိုလှောင်မှု / ပေးခဲ့သည်
နောက်တစ်ခု: SET Expo မှာ lineup နှင့်အတူ MOG မိတ်ဖက် 2019
လက်ထောက် Editor ကို / Swing Editor ကို
Assistant / Recruiter Casting